संसद बैठक: शून्य समयमा कसले के भने ? | Kendrabindu Nepal Online News
संसद बैठक: शून्य समयमा कसले के भने ?
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार १५:१२
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले हालैको बाढी, डुबान तथा पहिरोपीडितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले तराई मधेशमा डुबान तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी नगरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद लक्ष्मी परियारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र हालै पूर्वी जिल्लामा दलित युवामाथि भएको कुटपिटको घटना छानबिन गर्न माग गरिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश तथा प्रदेशबाट स्थानीय निकायमा जाँदा यातायात क्षेत्रमा रुट परमिट लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै रुट परमिट लिनुपर्ने व्यवस्थाले यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको बताइन् ।
सांसद विरोध खतिवडाले सुनको अवैध कारोवार रोक्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र यसको मूल्यलाई नियन्त्रणमा समेत राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सांसद बोधमाया यादवले तराई मधेशमा रोपाइँ जारी रहेको अवस्थामा मलखाद अभाव रहेको छ, यसतर्फ कृषि मन्त्रालयको ध्यान गएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा पौडेलले पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा यातायातमा एक पालिकाबाट अर्काे पालिकामा प्रवेश गर्दा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा दोहोरो कर हटाउन माग गरे । सांसद सत्या पहाडीले डोल्पाको दुनैलगायत सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्यस्थिति माथि उठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।
सांसद समिना हुसैनले बकर इदमा सार्वजनिक बिदा दिन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । त्यस्तै सांसद सीतादेवी यादव र सरिताकुमारी गिरीले तराई मधेशका बाढीपहिरोपीडितलाई थप राहतको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विगतका द्वन्द्वपीडितले सामाजिक न्यायसमेत नपाएको गुनासो गरेकी छन् ।
अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा रहेको रामधुनी मन्दिरको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न माग गरेका छन् ।
Prevकाभ्रेमा करेण्ट लागेर एकजनाको मृत्यु
हतार भएका बेला कसरी मेकअप गर्ने ?Next
संसद बैठकमा एक दिनको खर्च ७ लाख रुपैया
संसद बैठकमा आज मन्त्रीहरुले जवाफ दिने